Izindawo eziyi-12 okufanele zigwenywe ngo-2018 ngokusho kwe-CNN | Izindaba Zokuhamba
I-CNN isanda kushicilela uhlu lwezindawo eziyi-12 izivakashi okufanele zizigweme ngesikhathi sabo sokuphumula ngo-2018. Ngaphandle kwedatha enhle iBarcelona ebhalise ngayo ngo-2016 njengedolobha lezivakashi ngenxa yezivakashi ezingama-34 ezibe nayo ngalowo nyaka, kuyamangaza ukuthi kuvela ohlwini kanye namanye amasayithi afana neTaj Mahal, iGalapagos Islands noma iVenice. Yini eholele ekutheni iCNN ingancomi ukuvakashela lezi zindawo?
5 Iziqhingi zaseGalapagos
Ingosi yezindaba yaseMelika iphikise ukuthi ukuminyana kwabantu yikhona okuyimbangela enkulu yokungavakasheli iBarcelona ngonyaka ka-2018, njengoba kunemiphumela emibi edolobheni nakubantu abahlala kulo.
Bakhomba futhi ne-phobia yezivakashi eye yakhishwa eBarcelona phakathi kwezinye izakhamizi ezikhombisa ukungagculiseki kwabo ngezokuvakasha ngobuningi ngokusebenzisa imidwebo yegrafiti nemiboniso. Eqinisweni, baxwayisa ngokuthi ababhikishi bafika olwandle lwaseBarceloneta ngo-Agasti odlule ukuyosola imikhuba yokuziphatha kwabavakashi.
Ngokunjalo, i-CNN ikhombisa ukuthi imibhikisho yaseBarcelona inyuke kanjani ngokwenyuka kwentengo yokuqashwa kwamafulethi ngenxa yezinsizakalo ezifana ne-Airbnb, okwenza kube nzima kakhulu kwabanye ukuthola indawo yokuhlala kanti abanye babaphoqa ukuba bashiye amakhaya abo ngenxa amanani aphezulu kakhulu. Baphinde basho nokuthi uMkhandlu Wedolobha wazama kanjani ukuxazulula le nkinga ngokushaya umthetho okhawula isibalo semibhede yezivakashi.
Njengenye indlela ekuminyaneni kweBarcelona, ​​bancoma ukuvakashela iValencia ngonyaka we-2018 ngoba kuyidolobha okunikezwa kwalo ngokudla nangamasiko kungancintisana nenhlokodolobha yaseCatalan kepha kube nekhefu "elincane kakhulu".
Ukuminyana kuyisizathu esenza ukuthi i-CNN ifake iVenice kulolu hlu. Njalo ngonyaka cishe abantu abayizigidi ezingama-40 bavakashela leli dolobha. Ukugeleza okukhulu abantu abaningi baseVenetians abakwesabayo kuzoba nemiphumela engemihle ezikhumbuzweni zedolobha ezinje, ngokwesibonelo, iStark Mark's Square.
Eqinisweni, ezinyangeni ezedlule uhulumeni wasekhaya uthathe isinqumo sokwamukela izindlela zokulawula ukungena kwalesi sikwele esihle ngo-2018 ngokusebenzisa amarobhothi alawula ukungena kwale ndawo futhi ngokusungula amahora okuvakasha lapho kuzodingeka ukuthi ubhukhe kusengaphambili.
Lo mthetho omusha uzophelelisa intela yabavakashi esetshenziselwa ukuvakashela iVenice futhi eyahlukahluka kuye ngesizini, indawo lapho ihhotela likhona nesigaba salo. Isibonelo, esiqhingini saseVenice, kukhokhiswa i-euro elilodwa ngenkanyezi ngayinye ngesizini ephezulu.
Okusalungiswa kwemithethonqubo emisha kuza ngemuva kokuthi i-Unesco izwakalise ukuxwayiswa kokuwohloka kweVenice, ebiphethe isihloko seGugu Lomhlaba kusukela ngo-1987.
Ngenxa yokwanda kwezivakashi idolobha laseCroatia elihlangabezane nakho ngenxa yochungechunge lwe-'Game of Thrones ', iziphathimandla zendawo kudingeke ukuthi zisungule inani labantu abavakashela nsuku zonke ukwehlisa ukuminyana kwabantu kusukela ngo-Agasti 2016, iDubrovnik yathola izivakashi eziyi-10.388 4.000 endaweni eyodwa day, okuthinte kabi abahlali abahlala endaweni edumile ebiyelwe ngezindonga nezikhumbuzo. Eqinisweni, idolobha lilinganisele inani labantu abakwazi ukukala izindonga zekhulu le-XNUMX nsuku zonke ziye ku-XNUMX.
Futhi, ukuminyana kuyisizathu esenza ukuthi i-CNN ingatusi ukuvakashela iDubrovnik ngo-2018. Kunalokho iphakamisa iCavtat, idolobha elihle elisogwini lwe-Adriatic elinamabhishi amahle okuphunyuka ezixukwini.
Ngokuvakashelwa okuyizigidi eziyi-1,4 ngonyaka we-2016 nesilinganiso sabantu abayizi-5.000 XNUMX ngosuku, uMachu Picchu wayesezokufa ngempumelelo, into enanelwe yi-CNN. Ngokubheka le mininingwane, i-Unesco yafaka ikomkhulu lakudala ohlwini lwezindawo zokuvubukula ezisengozini ngenxa yokugcwala kwezivakashi futhi, ukuze kugwenywe ububi obukhulu, uhulumeni wasePeruvia kwakudingeka athathe izinyathelo zokuyivikela.
Abanye babo bekufanele basungule amashifu amabili ngosuku ukufinyelela iMachu Picchu futhi bakwenze nomhlahlandlela ngamaqembu abantu abayishumi nanhlanu kulo mzila ophawuliwe. Ngaphezu kwalokho, ungahlala enqabeni kuphela isikhathi esilinganiselwe ngokuthengwa kwethikithi. Ushintsho oluphawulekayo uma kubhekwa ukuthi kuze kube manje noma ngubani angazulazula ngokukhululeka emanxiweni futhi ahlale isikhathi eside njengoba efuna.
Njengokwenzekile kuMachu Picchu, Iziqhingi zaseGalapagos nazo zafakwa ohlwini lwamaGugu asengozini ngenxa yokugcwala kwabantu kanye nokushoda kwezinyathelo zikakhonkolo zokuyilawula okwesikhashana.
Ukuze kulondolozwe enye yezindawo ezinhle kakhulu zemvelo emhlabeni, uhulumeni wase-Ecuadorian wagunyaza uchungechunge lwemikhawulo efana nale: ukwethula ithikithi lendiza elibuyayo, ukubhukelwa kwehhotela noma incwadi yesimemo evela kumhlali wendawo kanye nokulawulwa kwamakhadi omgwaqo .
Iziqhingi zaseGalapagos zingenye yalezo zindawo i-CNN engeluleki ukuthi ziye e-2018 futhi kunalokho iphakamisa iziQhingi zeBallestas zasePeru, ogwini lwasePacific, lapho ungathokozela khona nezwe elihle nezilwane zomdabu.
I-Antarctica, iCinque Terre (e-Italy), i-Everest (Nepal), iTaj Mahal (India), iBhutan, iSantorini (iGrisi) noma i-Isle of Skye (eScotland), Baqedela uhlu olunikezwa yi-CNN futhi lubhekela izizathu zemvelo noma ukuminyana.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Izindawo eziyi-12 okufanele uzigweme ngo-2018 ngokwe-CNN